Imiphumela ye-Ultrasonic kwi-Precipitation ne-Froth Flotation - I-Hielscher Ultrasound Technology
Amanzi emfucumfucu yezimboni avame ukugcotshwa kakhulu ngenxa yokusetshenziswa ngokweqile kwe-sulfuric acid. Amanzi amdaka ahlanganisiwe aqukethe izinsimbi ezisindayo zivame ukuphathwa ngokuqothuka kwamakhemikhali ngemuva kokubumbana nokuntanta. Ukulungiswa kwesimo se-Ultrasonic ngaphambi kwe-flotation kuholele ekunciphiseni okukhulu kwe-zinc hydroxide eyenziwe ngesikhathi kwezulu. Ngaphezu kwalokho, i-sonication iphinde yathuthukisa ukususwa kwemishini kwe-zinc hydroxide ezindaweni eziphezulu zezinhlayiya ze-gypsum.
I-Froth Flotation kanye ne-Ultrasonic Conditioning
Izinhlayiya ezinhle ziletha izinkinga ezikhethekile ekuhlangeni. Ukutakula kuvame ukwehla ngaphansi kosayizi othile obuhlakaniwe. Umsebenzi wakuqala owenziwa nguGaudin nalabo osebenza nabo (1931) bakhombisa ukuthi ukubuyiselwa kwamaminerali we-zethusi okuyi-iron. I-zinc nomthofu kuphezulu, > I-95% ebangeni lobukhulu bezinhlayiyana ze-10-100 µm, kodwa ngaphansi kwe-10 µm okubuyayo kwehlela ebangeni 70-85%. AbakwaTrahar noWarren (1976) bafingqe amabanga osayizi abonwayo wokubuyiselwa okuphezulu kwamaminerali amaningi ﬂ oated ngaphansi kwezimo ezijwayelekile zokuhlola. Amabanga osayizi ezimweni eziningi anwetshiwe ngokushintsha izimo nokuphathwa kabi kwamakhemikhali wamakhemikhali nawomzimba.
I-Sonication iyindlela ephumelelayo yokwelashwa yokususa izinsimbi ezisindayo ezinjenge- iron, i-zinc ne-zethusi emiseleni yezimayini ze-acid nezinye izinto zensimbi.
I-Ultra Power isetshenziswa kabanzi ukususa ukungcola kumaminerali. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-sonication ikhuthaza ukususwa kwe-zinc kusuka kuma-hydroxide precipitates, kanye nokuhlukaniswa kwe-zinc hydroxide kanye ne-gypsum precipitates yi-encibilikisiwe yomoya. Kusetshenziswa i-carboxy-methyl cellulose (CMC) njengedepho yamaminerali e-calcium oxide ku-flotation, ucwaningo selufakazisile ukuthi i-sonication ithuthukisa ukususwa kwemishini kwe-zinc hydroxide ebusweni bezinhlayiya ze-gypsum.
Ukuqhathanisa ukususwa kwethusi ngokumelene nesikhathi kwikhambi labo phakathi kokuhlanganiswa kokulashwa kwangaphambi kwe-ultrasonic neseli le-Denver, isitokisi seDenver kuphela, nokusetshenziswa kanyekanye kwe-ultrasound neDenver flotation cell. (Ishak & I-Rowson 2009)
Imiphumela ye-Ultrasonic ku-Flotation
U-Ishak noRowson (2009) bakhombisa ukuthi ukwelashwa kwangaphambi kwe-ultrasonic kuthuthukisa ukukhishwa kwezinsimbi ezisindayo (okungukuthi, i-iron, i-zinc, ne-zethusi) emgodini wokudonsa i-acid lapho kuhlanganiswa nohlelo lwe-flotation. Ocwaningweni, kwakusetshenziswa iseli leDenver Flotation. Bathole ukuthi i-sonication kusenesikhathi sokuqala sokwelashwa kwe-ultrasonic, okuyi-2 imizuzu yokuqala yesikhathi se-flotation, isebenza kakhulu futhi inikeza imiphumela engcono kakhulu ye-flotation ethuthukisiwe. Ngokulashwa okuhlanganisiwe kwe-Power-ultrasound neseli le-Denver flotation, kuze kube ngu-3% wokususa umehluko kutholakale ngokuqhathaniswa neseli iDenver yodwa. I-pH efanelekile yensimbi ukucacisa futhi umthamo olungile wefrimu efanelekile kungenye yezinto ezifakayo empumelelweni yenqubo yokufiphaza eyenziwe ngcono.
Ukuqhathaniswa nokususwa kwe-iron (Fe) ngokumelene nesikhathi kwikhambi labo phakathi kwenhlanganisela yokwenziwa kwangaphambi kokulashwa kwe-ultrasonic neseli yeDenver, iseli leDenver kuphela, nokusebenzisa kanyekanye kwe-ultrasound neDenver flotation cell. (Ishak & I-Rowson 2009)
Ukuqhathanisa ukususwa kwe-zinc (Zn) ngokumelene nesikhathi kusixazululo sabo phakathi kwenhlanganisela yokwenziwa kwangaphambi kokulashwa kwe-ultrasonic neseli yeDenver, iseli iDenver iyodwa, nokusebenzisa kanyekanye kwe-ultrasound neDenver flotation cell. (Ishak & I-Rowson 2009)
I-Hielscher Ultrasonics ngumlingani wakho wesikhathi eside onolwazi uma kuziwa ekusebenzeni okukhulu kokusebenza kwe-ultrasonic. Ukumboza ububanzi obugcwele kusuka kuma-compact lab ultrasonicators kuya kuma-processor we-bench-top processors kuze kufike ezinhlelweni ze-ultrasonic zezimboni ngokugcwele, i-Hielscher ikunikeza imishini efanelekayo kakhulu ye-ultrasonic yohlelo lwakho lokusebenza. Ngezinqubo ezinjengefracation ye-froth, ukuhlanza komhlaba kuyizinhlayiyana, ama-ultrasonicators aphezulu we-Hielscher angamadivayisi athembekile, asebenza ngokuthembekile angama-24/7 ngaphansi kwemithwalo esindayo nasezindaweni ezifunwayo. Hielscher Ultrasonics’ ama-processor ultrasonic processors angahambisa ama-amplopes aphezulu kakhulu. Amandla okufika ku-200µm angaqhutshwa kalula ekusebenzeni okuqhubekayo kwe-24/7. Ukulawulwa okuqondile kwemingcele yenqubo ye-ultrasonic, ukulungiswa okulula kwepharamitha nokulungiswa kwesikrini sokuthinta noma isilawuli kude sesilawuli kude, ukuqoshwa kwedatha okuzenzakalelayo ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi nokushisa kwe-plug-in kanye nezinzwa zokucindezela kuqinisekisa ubungani bomsebenzisi, ukuphuma kwekhwalithi ephezulu nokuvumelana okungaguquki ikhwalithi yomkhiqizo.
Uyacelwa ukuthi usebenzise ifomu elingezansi ukucela ulwazi olungeziwe mayelana nokuhanjiswa kwezulu kwe-ultrasonic kanye neflash yefour. Sizokujabulela ukuxoxa ngenqubo yakho nawe futhi sikunikeze uhlelo lwe-ultrasonic oluhlangabezana nezidingo zakho!
Ishak, Wan MF; I-Rowson, NA (2009): Umphumela we-Ultrasound pre-Ukwelashwa ku-Froth Flotation Performance. I-International Journal ye-Chemical, i-Moleky, i-Nuclear, i-Equipment kanye ne-Metallological Engineering Vol.3, No.6, 2009.